ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့်လ၏အားကစားပြိုင်ပွဲ - သတင်း Rule
ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်: ရုပ်ပြဖန်ဆင်းရှင်, နဂါးဘယ်နေရာမှာမဆို, ဂရိတ်အီတလီစားဖိုမှူး, စူပါ Arc အလင်း, စုစုပေါင်းစစ်ပွဲစစျပှဲမြား: နိုငျငံတျောသညျနှငျ့သငျ့ကို iOS device ကိုအပေါ်ကြိုးစားကြည့်ပါဖို့ပို
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad app များကိုနှငျ့အလ၏ဂိမ်းများကို” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 1st April လပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဆရာဝန်အဘယ်သူသည် မှစ. အီတလီစားဖိုမှူးမှ, ပျောက်ခြေအိတ်မှရှင်သန်ရပ်တည်ရေး-ထိတ်လန့်တောင်ကိုရီးယား - ထို App Store ကိုဆက်ဆက်မှာကျယ်ပြန့်အသင်းတော်ဖြစ်၏ 2016.
အကောင်းဆုံးကိုအသစ် app များနှင့်ဂိမ်းများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးယခုလအထက်ဖော်ပြပါအားလုံးပါဝငျသညျ, ပေါင်းဂီတ-အောင် tools တွေကို, retro ထောင်ထဲ Adventures, ကလေးများကာတွန်းဇာတ်ကောင် '' gurning ကူးယူသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ် rated ရာနှင့် app တစ်ခု.
အားလုံးစျေးနှုန်းများအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကမှန်ကန်သောများမှာ, သငျတို့သ "IAP" မြင်ပါက app ကိုသို့မဟုတ်ဂိမ်း In-app ကိုဝယ်ယူအသုံးပြုသည်ကိုဆိုလိုသည်. Android app များရှာဖွေနေ? သူတို့အဘို့သီးခြားလစဉ် roundup ရှိပါတယ်.
ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်: ရုပ်ပြဖန်ဆင်းရှင် (အခမဲ့ + IAP)
ကလေးများမှာရည်ရွယ်, Whovian မိဘများလည်းအတူပျော်စရာတွေအများကြီးရှိသည်လိမ့်မယ်ပေမယ့်. ဒီဘီဘီစီ app ကိုအမျိုးမျိုးသောဆရာဝန်များသရုပ်ဆောင်သငျသညျဒီဂျစ်တယ်ကာတွန်းဖန်တီးခြင်းရရှိသွားတဲ့, အပေါင်းအဘော်နှင့်ဂြိုလ်သား, ရိုးရှင်းတဲ့ interface နဲ့တစ်ဦး mix'n'match နဂါးဖန်ဆင်းခြင်း tool တစ်ခုနှင့်အတူ. ကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာဖန်တီးမှုကစား (အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေး).
Miitomo (အခမဲ့ + IAP)
Nintendo ရဲ့ပထမဆုံးတရားဝင်မိုဘိုင်း app ကဒီမှာ, အကျွမ်းတဝင် Mii ဇာတ်ကောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် - ကဂိမ်း၏လျော့နည်းနှင့်ကိုယ်ပွား-based လူမှုရေး app ကိုပိုင့်ပေမယ့်. တစ်ဦး Mii Create, နှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိနှင့်အတူမိတ်ဆွေများ့ဖို့ "လူမှုရေးသွားလာရင်း-အကြား" အဖြစ်သူတို့ကိုပယ်ပေးပို့, Mini-ဂိမ်းများနှင့်တည်ဆောက်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း. ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သောပေမယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်.
ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်အသစ်ရရှိနိုင်, ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ server များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားစာရွက်စာတမ်းများသို့သင့်ရဲ့မိန့်ခွန်းလှည့်သောပျော့ရဲ့သတ်ပုံ App ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အမျိုးမျိုးသော devices များမှသူတို့ကို access လုပ်နိုင်. ဒီ app ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် - သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်အသုံးပြုတဲ့£ 14.99-a-လ "နဂါးဘယ်နေရာမှာမဆို" ကြေးပေးသွင်းလိုပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်.
က Sky ကလေးတွေက (အခမဲ့ + subscription)
ဤသည်ဗြိတိန်တွင်သားသမီးတို့အဘို့ Sky ၏ app သစ်သည်, CBeebies မှကာတွန်းကွန်ယက်မှကလေးတွေ '' လိုင်းများမှအတူတူပြပွဲသို့ဆောင်ခဲ့, သီးသန့်ပြသ၏ဂတိနှင့်အတူ (ပါဝင်အသစ် Morph ဖြစ်စဉ်များ) အတွက်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ. တစ်ဦးကအနာဂတ် update ကိုလည်းကြည့်ရှုအချိန်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားဖို့မိဘများကို enable လိမ့်မည်.
သငျသညျအယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့်အတူမိသားစုဝင်တစ်ဦးရှိပါက, ဒီ app ကိုထုတ်စစ်ဆေးနေကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်. ဒါဟာတစိတ်တပိုင်းဟာသစ်ထုတ်လုပ်ရေး app ကိုဖွင့်, သူတို့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်နှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ၏စံချိန်တင်ထားရန်. သင်တို့သည်လည်းနောက်ဆုံးပေါ် Alzheimer's-related သတင်းရဖို့အသုံးပွုနိုငျ, သငျသညျနားအသိပညာတစ်စုံလိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများ၏ Javoo ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူ chat ဖို့.
ဂရိတ်အီတလီစားဖိုမှူး - ချက်ပြုတ်နည်း (အခမဲ့)
startup ဂရိတ်ဗြိတိန်မှစားဖိုမှူးများကချက်ပြုတ်နည်းများ featuring apps များဖြန့်ချိခဲ့သည်, ဟုတ်ကဲ့, အလွန်ကြီးစွာသောဗြိတိန်နိုင်ငံစားဖိုမှူး. အခုတော့အီတလီမှ၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလှည့်မယ့်. ဒီကမ်းလှမ်းမှု 118 ကနေချက်ပြုတ်နည်းများ 26 စားဖိုမှူး, င်မှအချိုပွဲမှ. အဆိုပါညွှန်ကြားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လိုကျလြှောကျဖို့လွယ်ကူပါတယ်, နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများရတဲ့များအတွက်နေရာလေးကိုစျေးဝယ်-စာရင်းအင်္ဂါရပ်ရှိရဲ့.
ရေးသားသူ Liine အခြားအနုပညာရှင်တွေတို့တွင်အ Daft Punk နှင့်Björkအသုံးပြုသောဂီတ tools တွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, သို့သော်၎င်း၏အသစ်က iPad app ကိုမည်သူမဆိုအဘို့ဖြစ်၏. ဒါဟာတစ်ဦးလက်လှမ်းင်, အီလက်ထရောနစ်ဂီတအတွက်ပျော်စရာ app တစ်ခု, သောသင်တစ်ဦးအပိုအခိုက်အခါအတူတူစည်းချက်နှင့် Melody ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ဖို့ကလွယ်ကူစေသည်, ထို့နောက်အခြားသူများနှင့်သူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်မျှဝေ.
NEXAR - AI အ dashcam (အခမဲ့)
Dashcams မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူကြိုက်များလာပြီပြီ, လမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းရှေ့ဆက်စဉ်မောင်းနှင်, ယာဉ်မတော်တဆမှုများသက်သေအထောက်အထားများအဖြစ် (သို့မဟုတ် ထိ မိ. လဲကြယ်ကြွေ). Nexar တစ် dashcam သို့သင့်ရဲ့ iPhone လှည့်အဘို့အလိမ္မာပါးနပ်စိတ်ကူးသည်, ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတင်အရာအားလုံးကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာမှ upload ပြုလုပ်သတိပြုမိဖြစ်ပေမယ့်.
ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရဲ့: သင့်ရဲ့ဖောက်သည်-service ကိုတိုင်တန်းဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးလိုတဲ့ chatbot-based app ကို. ခရီးသွားကူညီပြီးနှင့်နှောင်းပိုင်းပေးပို့ထံမှတွေ့နေရတယ်ထုတ်ကုန်ရန် - သူ - စိတ်ကူးသင်တိကျတဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကြသောအခါဘာမှားသှားကပြောပြကြောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်တို့အဘို့တိုင်တန်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုင်တွယ်. ၎င်း၏အာရုံကိုဗြိတိန်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်, အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရရှိနိုင်မယ့်ပေမဲ့.
Amber နှင်းဆီအားဖြင့် MuvaMoji (£ 1.49)
မော်ဒယ် Amber နှင်းဆီမကြာသေးမီကဟောင်းမိတ်ဖက် Kanye West နှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ဗျာဒိတ်တော်များများအတွက်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လုပ်. ယခုသူတစ်ဦးရုပ်ပြောင် app ကိုအတူပလီကေးရှင်းစတိုးအပေါ်သူ၏ဇနီး Kim Kardashian နှင့်အတူဦးခေါင်းသည်-to-ဦးခေါင်းကိုသွား. MuvaMoji သင့်ရဲ့စာတိုပေးပို့ရေးအတွက်သုံးစွဲဖို့ရာနဲ့ချီလည်းပါဝင်သည်, အပါအဝင် - တစ်ကြိုဆိုခြေလှမ်း - လိင်တူချစ်သူပုံစံရုပ်ပြောင်များအပြည့်အဝအပိုင်း.
စူပါ Arc အလင်း.
စူပါ Arc အလင်း (£ 0,79)
"စူပါဆဋ္ဌဂံနှင့်တွေ့ဆုံဂျီသြမေတြီ Wars" ကအဖြစ်ငွေကောက်ခံ, သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုသိသူမည်သူမဆိုဒီအတော်လေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်တဲ့သဲလွန်စပေးသင့်. ဒါကသော်လည်းကရိုးရှင်းသောရိုက်ကူး '' em ups ၏ပရိသတ်များများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစိန်ခေါ်မှုစေသည်: ဒီမိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်အကောင်းဆုံးသောမှာ Twitch ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ပျောက်ဆုံး Socks များ: ယုတ်ညီအစ်ကိုများ (£ 3.99)
ပျောက်ဆုံးခြေအိတ်တစ်ဂိမ်းကိုအများဆုံးဖှယျဘာသာရပ်ကဲ့သို့မြည်မပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောကို Socks တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့အာဏာအားရစရာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအံ့မခန်းကာတွန်းစတိုင်ပုံရိပ်ယောင်နှင့်ကာတွန်းရှိပါတယ်, နှင့် 30 run ဖို့တီထွင်အဆင့်ဆင့်, အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းခုန်များနှင့်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်. ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာဘယ်တော့မှ.
White ကနေ့ (£ 4.99 + IAP)
သငျသညျကနေတောင်ကိုရီးယားရှင်သန်မှု-ထိတ်လန့်ကို PC ဂိမ်း၏မိုဘိုင်းဇာတ်ကားတစ်ပန်ကာနေလျှင်အသကျရှငျဖြစ်ဖို့ဘာတဲ့အချိန် 2001! သို့သော် snark ကိုင်, White ကနေ့နှစ်ခုသည်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်သောကြောင့်. ဒါဟာသော့ခတ်-up ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ဦးအမှန်တကယ်-creepy စွန့်စားမှုအစုံရဲ့, ကြောက်စိတ်အစားထက် gory သတ်ဖြတ်မှုများအပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူ.
စုစုပေါင်းစစ်ပွဲစစျပှဲမြား: နိုငျငံတျောသညျ (အခမဲ့ + IAP)
စမတ်ဖုန်းများအတွက် Key ကိုအသုံးပြုမှု 2016: လူမှုရေးကွန်ရက်, streaming များဂီတ, အိမ်ပြန်မယ့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်စဉ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အောင်နိုင်မှဗိုလ်ခြေပြုစုပျိုးထောင်… စုစုပေါင်းစစ်ပွဲစစျပှဲမြား: နိုငျငံတျောသညျစစ်တပ်ဗျူဟာအမျိုးအစားမှအကောင်းတစ်ထို့အပြင်ကြည့်, ကိုစုပ်ယူဂိမ်းနဲ့သင့်ရဲ့ PC မှာကစားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူ.
အမွေအနှစ် Quest (အခမဲ့ + IAP)
"cubelets နှင့်ယာဉ်မော်ကွန်းစုဆောင်း, နဂါး-သတ်လက်နက်နှင့်ဂီယာ,"Nexon ရဲ့ RPG များအတွက်စာရင်း app ကိုစတိုးဆိုင်ကရှင်းပြသည်, ကိုယ့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသွားပြီရာ. က Minecraft ကဲ့သို့မြည်ဆိုပါက… ကောင်းစွာ, အချို့တူညီရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးမှာအစဉ်အလာလှုပ်ရှားမှု-RPG ဂိမ်းပို, Craft တစ်ဦးသေသပ်အပိုထိထည့်သွင်းနှင့်အတူ.
ရှငျဘုရငျကိုယုန် (£ 0,79 + IAP)
ကျနော်တို့ wabbits အမဲနေ, ဒီမှာ! သို့သော်သာသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်. ဒါကအကုန်လုံးဘက်နှင့်အတူတစ်ကောင်းစွာ-လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရေးယူမှု-puzzler - ထိုကံသေဆုံးမှုသင့်ရဲ့ရေရှည် eared သူရဲကောင်းမှသားကောင်လဲကျနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းတဲ့ကိုပွတ်ဆွဲများမှာ, ဒါပေမယ့်မြတ်သောအဆင့်ကိုဒီဇိုင်းကယ့်ကိုသင့်ရဲ့တစ်သိန်းစုံစမ်းမည်. တစ်ဦး Indie ဂန္.
Faily ဘရိတ် (အခမဲ့ + IAP)
Faily ဘရိတ်လေးဘီးတပ် Crossy လမ်းမကြီး rip-off ကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါ,, နှင့်ပျော်စရာ - - ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရဲ့ထက်. သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နောက်တွင်မှ Viewed, ဂိမ်းသငျသညျရှုခင်း dodging တစ်တောင်ပေါ်ကဆင်း careering ရှုမြင်, စုဆောင်းဒင်္ဂါးပြား, သငျသညျ crash အခါ slow-motion replays မှာအံ့သြချီးမွမ်းကြ.
Gigglebug ရဲ့မျက်နှာလူမျိုး (အခမဲ့)
နောက်ဆုံး, ပျော်စရာတစ်ခုခု: Gigglebug ရဲ့မျက်နှာလူမျိုးသူတို့ရယ်စရာမျက်နှာများဆွဲနေတဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပေးအပ်နေတာပါဘယ်မှာသားသမီးတို့အဘို့တစ်တောက်ပ App ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့နှင့်ကိုက်ညီရန်ရှိသည် - ထုတ်ကုန်ရဲ့ front-facing ကင်မရာကဖမ်းမိ, နှင့်ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးထား. ကလေးတွေကကခစျြလိမျ့မညျ, ထိုသူတို့မိဘများတစ်လျှောက်ဆော့ကစားလည်းအပြင်းအထန်တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်.
ထောင်ထဲက Monsters RPG (အခမဲ့ + IAP)
ထိုဂိမ်းအတိတ်ထဲကနေတစ်ဦးကပေါက်ကွဲမှု. ထောင်ထဲက Monsters တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်ထောင်ထဲကဝဘ်ဆိုက် crawler ဖြစ်ပါသည်, ထောင်ထဲကမဟာရန်သူအချို့အသက်အရွယ် flashbacks ၏ဂိမ်းကစားပေးမည်သော, အဆိုပါ Bard ရဲ့ပုံပြင်နှင့်အခြားအမျိုးအစားဂန္. မဒီလုံးဝဟောင်းခေတ်ကြောင်း: သူ့ရဲ့ရောင်စုံဂရပ်ဖစ်များနှင့်အစာရှောင်-paced ဂိမ်းခေတ်သစ်ခံစားရ.
Bonbon Cakery (အခမဲ့ + IAP)
သငျသညျအား developer Kairosoft အားဖြင့်ဂိမ်းတစ်ခုအစဉ်အဆက်ကစားဖူးပါ, သငျသညျ Bonbon Cakery ထံမှမျှော်လင့်သောအရာကိုသိပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင်တစ်ဦးကိတ်မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို run တဲ့မဟာဗျူဟာဂိမ်းရဲ့, ဖောက်သည်များကျေနပ်အောင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သင့်လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်စဉ်. တစ်ဦးကအကျွမ်းတဝင်ဖော်မြူလာ, ကုမ္ပဏီ၏ယခင်ဂိမ်းအဖြစ်ပေမယ်အဖြစ်စွဲလမ်း.
ဒါက App Store ကိုဒီလကမ်းလှမ်းရန်ခဲ့အသစ်အပလီကေးရှင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးင်, သင်မူကားအဘယျသို့ခံစားခဲ့ကြ? အဆိုပါမှတ်ချက်တွေအပိုင်းအပေါ်က app များပေါ်တွင်သင်၏အကြံအစည်များအတွက်ဖွင့်, ကျွန်တော်တို့လွဲချော်မယ့်အသစ် apps များအဘို့သို့မဟုတ်သင့်အကြံပြုချက်များ.
29821	10 ပန်းသီး, App များ, အပိုဒ်, အကောင်းဆုံးက iPhone နှင့် iPad app များကို, သားသမီးရဲ့နည်းပညာ, ယဉ်ကျေးမှုကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတနှင့်အသံ, ဆရာဝန်အဘယ်သူသည်, အင်္ဂါရပ်များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ, iPad, iPhone ကို, မီဒီယာ, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စမတ်ဖုန်း, စတူးဝပ်သောင်, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← Dyson ဟာသန့်စင်သော Cool Link ကိုလေတပ်သန့်လွှတ်တင် အားလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစေပါဒါကကိုးအများစုဟာစိတ်ပျက်စရာအမှား →